Ukuphonononga iXiaomi Mi A1 ngukumkani omtsha waphakathi kuluhlu lwe-Android | I-Androidsis
Uvavanyo lweXiaomi Mi A1
UFrancisco Ruiz | | Reviews, Xiaomi
Sele ziintsuku ezilishumi elinambini ukusukela oko sapapasha Unboxing yeXiaomi Mi A1Ukukhutshwa kwemveliso endikuthembise yona nonke ukuba nizise uhlaziyo olupheleleyo lwevidiyo yesiphelo esisemilebeni yomntu wonke.
Yiyo loo nto namhlanje ndinovuyo ukumema wena kule nto ukugqitywa kwevidiyo epheleleyo kunye neXiaomi Mi A1, kwaye nditsho ndibanzi kuba ndizisa ividiyo engaphezulu kwemizuzu engama-30 ubude, apho ndicacisa khona onke amandla kunye nobuthathaka beXiaomi Mi A1, (oku kubalwa ukuba le terminal ibinayo okanye inendawo ebuthathaka), kuba iXiaomi Mi A1 sisixhobo se-Android esibizwa ngokuba sesona sitishi sithengisa kakhulu phakathi kuluhlu.
1 Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Mi A1
2 I-Unboxing yevidiyo yesiphelo esenziwe nge-24 ka-Okthobha
3 Yonke into esiyifumana kwiXiaomi Mi A1
3.1 Ukugqiba kunye noyilo
4 Inkqubo yokusebenza
4.4 Umfundi weFingerprint ngasemva
5 Izimvo zoMhleli
Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Mi A1
Umzekelo Inguqulelo yam A1 Global
Inkqubo yokusebenza I-Android enye ye-7.1.2 ngaphandle kwomaleko wokwenza ngokwezifiso
Isikrini I-5.5 "LCD ye-LTPS enesisombululo se-FullHD 400 dpi kunye neGorilla Glass 5 yokhuseleko
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 625 enetekhnoloji ye-Octa Core 64 Ghz engama-2.0
GPU I-Adreno 506 ukuya kwi-650 Mhz
i-ram I-4 Gb LPDDR4
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64 Gb ngenkxaso ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-128 Gb
Ikhamera esemva Iikhamera ezimbini ze-12 + 12 mpx ezinendawo ekujoliswe kuyo ye-2.2 kunye ne-2.6 ngokwahlukeneyo-2X zoom zoom-Dual LED Flash - Autofocus post post detection - HDR - 4K video recording -
Ikhamera yangaphambili 5 mpx ngemowudi yobuhle kunye nokurekhodwa kwevidiyo epheleleyo ye-HD
Conectividad Iibhola ezimbini zeSIM Nano SIM okanye iNano SIM + MicroSD - 4G FDD-LTE Bands: 1/3/5/7/8/20 -TDD-LTE Bands: 38/40 - 3G WCDMA Bands: 1/2/5/8 - 2G I-GSM: Ibhendi 2/3/5/8 -Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 Ghz kunye ne-5 Ghz- iBluetooth 4.2 A2DP-GPS ene-A-GPS kunye nenkxaso ye-GLONASS- Irediyo ye-FM-OTG - OTA-
Ezinye izinto Isaziso sikhokelwe- Isifundi seFingerprint ngasemva esijongeka sikhulu-Umzimba we-Unibody owakhiwe ngesinyithi- Uhlobo lwe-USB-Ukutshaja ngokukhawuleza -Uhlaziyo lukaGoogle lokhuseleko -Ulungiswa kwi-Android Oreo-
Ibhetri I-3080 mAh ayinakususwa
Ubukhulu X x 155.4 75.8 7.3 mm
U bunzima I-165 gram
Ixabiso 193.67 iiYurophu
I-Unboxing yevidiyo yesiphelo esenziwe nge-24 ka-Okthobha
Yonke into esiyifumana kwiXiaomi Mi A1
Ukugqiba kunye noyilo
Ngokuphathelele kugqityiwe kunye noyilo lweXiaomi Mi A1, inyani kukuba nangona ingezizo ezona ndawo zinomtsalane zonyaka ngokubhekisele kwisiphelo sescreen sonke okanye nayiphi na into enje esefashonini, inyani yile lonto Yeyona itheminali inomdla kakhulu, Ezinezinye zezona zinto zigqityiweyo zepremiyamu kwi-aluminium ene-anodized, kwaye ngokubanzi lo mbala umnyama umnyama uyenza ibe yenye yezona ndawo zibalaseleyo zibalaseleyo endiye ndonwaba ukuzivavanya ngokwam.
Ekwakhiweni, kugqityiwe, nakwizixhobo ezisetyenzisiweyo, kubonisa ukuba ikhupha umgangatho kuwo omane amacala, esinokuwabona ngokuwukhupha kwibhokisi yawo kwaye uyibambe ezandleni zethu. Isiphelo sendlela esinemilinganiselo efanelekileyo yokuba sisiphelo sendlela esinyanisekileyo, kuba siyayiqhelanisa ngokugqibeleleyo nesandla sombulelo kwii-bezels zayo ezigobileyo kunye nokubamba kwayo okungafaniyo nokubanda kwesinyithi.
Ngokubhekisele kwiscreen seXiaomi Mi A1 sine Iphaneli yetekhnoloji ye-IPS ngesisombululo esipheleleyo se-HD kunye nokuxinana kwepikseli ye-401 dpi ezisinika amava omhle kakhulu kumgangatho weetheminali zoluhlu oluphezulu nangaphezulu kunale Mi A1. Ukunika umzekelo osebenzayo, Isikrini sale Xiaomi Mi A1 sikwinqanaba elifanayo nescreen seBQ Aquaris X Pro, i-terminal ephantse iphindwe kabini kwixabiso lale Xiaomi Mi A1.
Ngokuphathelene nokuchukumiseka kwayo okanye impendulo ethambileyo, inyani kukuba sesinye sezona zikrini zibalaseleyo esinokuzifumana kwisiphelo sexabiso elihamba kulo le Xiaomi Mi A1. Isikrini esine ngaphezulu kokukhanya okuphezulu ngokwaneleyo ukuze isetyenziswe ngokugqibeleleyo ngaphandle nokuba ilanga lithe ngqo kulo.
Ngokuphathelene nokukhanya okuncinci, le Xiaomi Mi A1 inenqanaba lokukhanya elisezantsi kum lelinye lesiphelo apho ndikwazileyo ukulibona liphantsi, lilungele xa sisebusuku sisebenzisa i-smartphone ebhedini ngaphambi kokuba silale ngaphandle kokuphazamisa nabani na kwaye ungonakalisi umbono wethu.
Ukukhuselwa kweglasi yeCorning Gorilla kuyenza ngakumbi ukumelana nezo zikrwelo zincinci kusetyenziso lwemihla ngemihla, kwaye ngaphezu kwako konke, bayayikhusela kulowo ugqithisileyo weminwe esiyibonayo kwizikrini zezinye iiterminal ze-Android kolu luhlu lwamaxabiso athi, emva kokuzisebenzisa okwemizuzu embalwa, kufuneka sihlale sizicoca kuba ziba Iyacaphukisa. Kule meko namhlanje sijongana nesikrini seXiaomi Mi A1, kubonakala ngathi inoluhlobo oluthile lonyango oluchasene neminwe ukusukela Ngokwenyani sisinye sezikrini ezibambisa ukungcola, uthuli kunye neprinta yeminwe encinci ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla.
Ngokubhekisele kwinkqubo yokusebenza, sijamelene ne Inguqulelo ye-Android Nougat 7.1.2 inyulu ngokupheleleyo kunye nohlaziyo lukaGoogle Pixel. Inguqulelo ye-Android AOSP apho siza kuzifumana sinelanga kakhulu ngezicelo ezibini zeXiaomi, isicelo esibizwa ngokuba luluntu kunye nesicelo solawulo kude seXiaomi esibizwa ngokuba yiMi Remote.
Abanye uhlaziyo oluhlaziyiweyo kwaye lukhuselwe ixesha elide, zombini uhlaziyo lwenyanga lwepatch yokhuseleko ye-Android, kunye nohlaziyo lokulungisa iimpazamo ezincinci kunye nokusombulula iingxaki ze-Android, kunye nohlaziyo olukhulu kwiinguqulelo ezintsha ze-Android.
Kule yokugqibela silindele oku IXiaomi Mi A1 yenye yeetheminali zokuqala ezingezizo zikaGoogle zokuhlaziya kuhlobo lwamva nje lwe-Android 8.0 okanye i-Android Oreo. Kungenxa yoko le nto ndiye ndaphela ndimbhaptiza ngegama lesidlaliso elithi «Xiaomi Nexus».
Ukuba sijonga ngokusondeleyo kwiinkcukacha zobuchwephesha endizishiye kwitafile engentla kwale migca, siyabona ukuba le Xiaomi Mi A1 ayinanto ngaphandle kwento emfutshane, kwaye ineprosesa ye-Snapdragon 625, iprosesa engama-64 ye-Octa Core kwi-2.0 Ghz yesantya esiphezulu sewotshi, kunye ne-Adreno 506 GPU, i-4 Gb ye-LPDDR4 RAM kunye ne-64 Gb yayo yokugcina yangaphakathi ngenkxaso ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwenye i-128 Gb ngaphezulu komthamo omkhulu, isinika yonke into enokuthi ivavanywe ngumsebenzisi ophakamileyo we-Android mihla le.
Isixhobo esinexabiso lokuba ukuba siza kuyithelekisa nezinye iimodeli kwintengiso yangoku, singayifumana Iitheminali ezijikeleze i-300/350 yee-Euro ezithengiselwa uluntu.
Ngokunxibelelana sinesiphelo sendlela esinayo yonke into, ine-Wi-Fi 2.4 Ghz kunye ne-5 Ghz, iBluetooth 4.2, iGPS kunye ne-aGPS GLONASS, OTG. Ekuphela kwento esiyiphosayo kukunxibelelana kweNFC ngelishwa le terminal Android isweleyo, oku ukongeza kwi ayinayo irediyo ye-FM, ukusebenza okwangoku kuninzi lwabasebenzisi be-Android abayifunayo kwaye bayifuna.
Ngaphandle koko iceliwe kwaye yacela ibhendi engama-20 800 Mhz njalo Ngokumalunga nokunxibelelana kwe-4G LTE eSpain siya kulungiselelwa kakuhle ngalo lonke ixesha.
Isandi esiveliswa yile Xiaomi Mi A1, nangona ingekho kwinqanaba lesiphelo seetheminali ze-Android, esingazukufuna kwisiphelo kolu luhlu lwamaxabiso, nokuba, inyani kukuba linyathelo okanye amabini ngaphambi kwetheminali endiye ndakwazi ukuvavanya kweli candelo lamaxabiso kwaye ibuye ibize kancinci.
Ke sinayo ngaphezulu kwenqanaba lamandla elichanekileyo apho isandi siphuma kwisithethi esinye esibekwe ezantsi kwesiphelo ukuya ngasekunene kwesinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB, sis isandi esivakala kakhulu, sicace gca ukuba asigqwetheki naxa useta ivolumu ukuya kuthi ga kwinto esivunyelwe yinkqubo leyo.
Umfundi weFingerprint ngasemva
Ngokumalunga nokufundwa kweminwe okubekwe emva kwetheminali, ndikuxelele ukuba eyona nto iphantsi endinokuyibeka iyafana ukuba ibekwe emva kwetheminali endaweni yokuba ibe ngaphambili kuba ndingaphezulu umfundi weminwe kwiqhosha lasekhaya. Ukuphumla okusele sikuko ngaphambili omnye wabafundi abafunda iminwe abalungileyo ndibakhe bazama kwisiphelo se-Android, Ukugqwesa ekusebenzeni okanye ubuncinci kulingana nokufundwa kweminwe yeminwe ye-LG G6 yam.
Umfundi weminwe apho ukongeza kwi ungaze usilele nokuba ungabeka kakubi kangakanani umnwe wakho kuwoIkwasinika isenzo somzimba apho, ngokushenxisela ezantsi kube kanye, siyakuvula ikhethini lesaziso ukubona izaziso zethu ezilindileyo ngaphandle kokuchukumisa isikrini seXiaomi Mi A1. Ngokutyibilika umnwe wakho isihlandlo sesibini, fikelela kwiiToogles zekhethini yesaziso, kwaye okokugqibela, utyibilikise phezulu, vala ikhethini lesaziso kwakhona ngaphandle kokuchukumisa isikrini seXiaomi Mi A1 nangaliphi na ixesha.
Ngokuphathelele ibhetri edityanisiweyo nengasuswayo yale Xiaomi Mi A1, ibhetri eyi-3080 mAh enescreen esinesisombululo esipheleleyo se-HD, ibindinika amanani alungileyo. Oku bendinika ukuzimela okugqithe kumhla wokusetyenziswa kwamanani ajikeleze iiyure ezi-6 zescreen esisebenzayo, ihlala inenqanaba lokukhanya okuphezulu kunye nakho konke ukunxibelelana kunikwe amandla ngawo onke amaxesha.
Ikwanayo Inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza apho ngaphezulu kweyure enesiqingatha siya kuba nesiphelo esigcweleyo ukuqala kwinqanaba lebhetri le-5%.
Kuba umfanekiso uxabisa iwaka lamagama endinokubeka izimvo kuwo, apha ngentla ndikushiye kuvavanyo lwekhamera oluqhelekileyo esihlala silwenza kwiitheminali esizihlalutya kanye apha e-Androidsis. Uvavanyo lwekhamera apho sibona khona umgangatho wekhamera engasemva eyi-12 + 12 mpx kunye nomgangatho wekhamera yangaphambili ye-5 mpx.
Zombini ezi zinto zirekhodiweyo zenziwe kumgangatho opheleleyo we-HD ngaphandle kokwenza ngobuqhophololo Kananjalo nasekupheleni kwevidiyo, ngaphambi nje kokuba ndikubonise iifoto zovavanyo, ndikushiya imizuzwana embalwa yokurekhodwa kwevidiyo ehamba kancinci, (iSlow Motion) yeXiaomi Mi A1.
Icala elisezantsi kuphela endinokuthi ndilikhuphe okanye ndilibeke kwezi khamera zeXiaomi Mi A1 kukuba abakhange bongeze umfanekiso ozinzisayo ukuze ukurekhodwa kwevidiyo kungakhangeleki kushukuma.
Isikrini se-IPS FHD
4 GB ye-RAM
I-64 GB yokugcina kwangaphakathi
Ubomi obulungileyo bebhetri
Isitshixo seminwe yokufunda
Ibhendi engama-800 Mhz
Iikhamera ezigqwesileyo kuluhlu lwazo
Xiaomi yam A1
Uphengululo lwe: UFrancisco Ruiz Antequera obambe umfanekiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uvavanyo lweXiaomi Mi A1
Ekugqibeleni kwi-cons ongazange ube nayo kuba ingenayo i-FM Radio. Kwaye ayinamanzi.
Ndicinga ukuyithenga nditshintshe i-Sony Xperia Z3 yam, kodwa ezo zinto ngaphandle kwento yokuba ayinayo i-NFC yeyona nto indenza ndilinde omnye umntu ukuba ayifumane.
Indawo yokuloba iintlanzi sitsho
Ingcaciso. Kubonakala ngathi ukuba unayo iRadio FM kodwa ayisebenzi kwaye nanjengoko kungekho sicelo sifakelweyo ngoku ukuyimamela, asinakho ukufikelela ngqo.
Kwi-intanethi sele kukho iqhinga lokwenza irediyo isebenze, ukuba unomdla wokuyikhangela kuGoogle, khange ndikwazi ukuyivavanya ngqo, uya kundixelela.
Sebenzisa irediyo ye-FM kwiXiaomi Mi A1
Ukwenza irediyo ye-FM isebenze kufuneka silandele amanyathelo alula kakhulu:
Sivula ukucofa (okanye ukucofa) kwaye ucofe ikhowudi * # * # 6484 # * # *
Nje ukuba ikhowudi iphawulwe, siye ezantsi kwimenyu yovavanyo kwaye ucofe ukhetho 32. FM radio.
Ngaba unayo indawo yesibini ???
Ngaba kufuneka wenze iikopi zeapps ???
Ukunikezelwa okungapheziyo kwe-3 kwi-Geekbuying yokuBhiyozela i-11.11, uSuku lwee-Singles e-China
I-Honor V10 iya kuboniswa nge-5 kaDisemba